Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » COVID-19 wuxuu dethrones-ka 1918 hargabka u yahay masiibada ugu dhimashada badan Mareykanka
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Tirada dhimashada la soo sheegay ee ka timid COVID ee Mareykanka ayaa dhaafi doonta tirada hargabka faafa ee 1918 bishaan. Kuma adkaan karno musiibada sii socota, oo inta badan laga hortagi karo.
Dhimashada COVID-19 ee Mareykanka ayaa ugu sarreysa 675,000, iyadoo coronavirus uu beddelay ifilada 1918 waa cudurkii ugu dhimashada badnaa ee Mareykanka.
Waxaa jira in ka badan 42,000,000 kiisaska cudurka COVID-19 gudaha Mareykanka ilaa hadda.
Hargabkii 1918 -kii wuxuu dilay qiyaastii 675,000 oo Mareykan ah waxaana loo tixgeliyey inuu yahay masiibada ugu halista badan taariikhda dhow
Laga bilaabo 4:21 galabnimo Waqtiga Bari ee Isniinta, Sebtember 20, 675,446 Mareykan ah ayaa naftooda ku waayey cudurka faafa ee COVID-19, sida laga soo xigtay tirooyinka Jaamacadda Johns Hopkins, sidaas darteedna ay dhaafeen 675,000 dhimashada Mareykanka intii lagu jiray faafitaanka hargabka 1918.
Wadarta kiisaska caabuqa COVID-19 ee Mareykanka waxay ahaayeen in ka badan 42 milyan.
Tirada dhimashada ayaa la filayaa inay sii kordho iyadoo Mareykanka uu hadda la kulmayo mowjad kale oo caabuqyo cusub ah, oo ay sii hurisay kala duwanaanshaha degdegga ah ee Delta.
“Tirada dhimashada ee laga soo sheegey COVID ee Mareykanka waxay ka badan doontaa tirada hargabka faafa ee 1918 bishaan. Kuma adkaan karno sii socoshada, iyo inta badan laga hortagi karo, musiibada, ”ayuu ku soo qoray bartiisa Twitter -ka Tom Frieden, madaxii hore ee Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada, usbuuc ka hor.
Hargabkii 1918 -kii ayaa dilay dad lagu qiyaasay 675,000 oo Maraykan ah, sida laga soo xigtay Xarumaha Xakamaynta iyo Ka Hortagga Cudurrada waxaana loo tixgeliyey masiibada ugu dhimashada badan Ameerika taariikhda dhow ilaa hadda.
Dhanka kale, Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa TV-ga ka qaadan doona tallaalka xoojinaya COVID-19, xoghayaha saxaafadda ee Aqalka Cad Jen Psaki ayaa warbaahinta u sheegtay Isniintii. Biden wuxuu go’aansaday inuu tallaalo dadka Mareykanka ah iyada oo ay jirto dhaleeceynta garabka midig ee waajibaadkiisa tallaalka.